Fanambarana an-gazety iombonan'ny "Bureau Indépendant Anti-corruption" (BIANCO) sy ny Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM) noho ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa - Transparency International - Initiative Madagascar
Ny Birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly, na BIANCO, dia sampan-panjakana niforona tamin'ny 2004 izay manana andraikitra mifototra amin’ny fanatanterahana ny paikadim-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly nivoaka tamin'ny 21 septambra 2015 ary koa ny fandaharan'asan'ny fanjakàna Malagasy mifandraika amin'ity ady ity.
Transparency International - Initiative Madagascar, na TI-IM, dia fikambanana malagasy niforona tamin'ny taona 2000 izay mivoy ny foto-kevitry ny fangaraharana, ny tamberin’andraikitra ary ny fahamarinana. TI-IM no solontenan’ilay vondrona tsy miankina amin’ny fanjakana antsoina hoe Transparency International eto Madagasikara, izay vondrona fiarahamonim-pirenena anisan’ny mpitarika amin’ ity ady amin'ny kolikoly ity erak’izao tontolo izao.
Efa niara-niasa akaiky nandritra ny taona maro ny BIANCO sy TI-IM amin’ny maha-samy mpiantsehatra manan-danja azy ireo amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, ary ao anatin’ny fanajana ny anjara andraikitry ny tsirairay sy ny fahaleovan-tenany no anaovany izany. Mba hahafahana mampivaingana sy mampahomby kokoa ity fiaraha-miasa ity dia nanapa-kevitra ny hamolavola sy hanatanteraka fifanaraha-mpiaraha-miasa ny vondrona roa tonta, miaraka amin'ny drafi-piaraha-miasa iarahana.
Mikendry ny hanazavana ny fitsipika sy ny fomba hananterahana ny asa amin'ny sehatra dimy ity fifanarahana fiaraha-miasa ity, izay votoatin’ity fifanaovantsonia tanterahana anio ity. Ireto avy izany : ny fisorohana ny kolikoly amin'ny alàlan'ny fanabeazana olom-pirenena, ny fanohanana ny asa fanaovan-gazety fanatsikafonana momba ny kolikoly, ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fikarakarana ny fitarainan'ny olom-pirenena mifandraika amin'ny kolikoly, ny fandaminana ireo hetsika momba ny ady amin’ny kolikoly, ary ny fampandrosoana ny fikarohana momba ny kolikoly eto Madagasikara.
Ny fiaraha-miasan'ny BIANCO sy TI-IM momba ny fisorohana ny kolikoly amin'ny alàlan’ny fanabeazana olom-pirenena dia ho tanterahana amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny hetsika ataon'ny « Réseaux d’Honnêteté et d’Intégrité » (RHI) sy ny « Clubs Fongotra », vondrona misy ireo tanora mirotsaka sy mandray anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly, tarihin'ny BIANCO sy TI-IM.
Ny fiaraha-miasan'ny BIANCO sy TI-IM eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety fanatsikafonana dia mifandray amin’ny tambajotra MALINA, tetikasan'ny TI-IM hampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety fanatsikafonana ny kolikoly avo lenta eto Madagasikara. Samy hanao ny ezaka rehetra araka izay tratrany sy araka ny fanajany ny zony sy ny andraikiny, hizara ny fahalalany, indrindra amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-kevitra tsy tapaka sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny BIANCO sy ny TI-IM ao anatin’izao fifanarahana izao
Haharitra roa taona azo havaozina ny fifanarahana fiaraha-miasa vita sonia anio. Mifankasitraka noho izao fivoaran'ny fiaraha-miasan’izy ireo izao sahady ny BIANCO sy TI-IM, izay efa nahomby teo aloha, ary mino fa hanamafy kokoa ny tanjaky ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izany.
Niarahan’ny BIANCO sy TI-IM nanoratra ity fanambarana an-gazety ity.
Antananarivo, 10 septambra 2019